नयाँ वर्षको पहिलो मंगलबार आज, यसरी गर्नुहोस् गणेशजीको पुजा ! मिल्नेछ वर्षभरि नै लाभ ! – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख ०२, २०७६१७:३८
काठमाडौँ । धार्मिक परम्पराअनुसार भगवान गणेशलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट देवाको रुपमा पुज्ने चलन रहेको छ । हरेक व्यक्तिले पुजाआरधना गर्दा सबैभन्दा पहिले भगवान गणेशको पुजा गर्ने चलन रहेको छ ।
गणेश भगवानलाई सिद्धी दिने विर भगवानको रुपमा समेत लिने भएकाले गणेश भगवानको नाममा व्रत बस्ने, मन्दिर धाउने गर्छन् । मंगल ग्रहलाई समस्या निर्मानायकको रुपमालिने भएकाले मंगल ग्रहको खराब प्रभावलाई हटाउन मंगलबारको दिन भगवान गणेशको पुजा गर्ने गरिएको हो । त्यसकारण आज हामी तपाईहरुलाई गणेश भगवानलाई कसरी खुसी बनाउने भन्ने बारे पुजा गर्ने केही उपायहरु बताउन गइरहेका छौँ ।
विहन सबेरे उठेर स्नान गरेर चोखो कपडा लगाउने । त्यसपछि घरमा सम्भव भएर घरमै पुजा गर्ने यदि छैन् भने नजिकै रहेको गणेश मन्दिरमा गएर पुजा गर्ने । विशेष गरेर गणेशको पुजा गर्नलाई मंगलबार राम्रो मानिन्छ । त्यसकारण व्रत बसी विधिवत रुपमा पुजा गर्दा सोचेभन्दा राम्रो हुने मान्यता रहेको छ ।
गणेश भगवानको पुजा गर्दा घ्यू अपर्ण गर्नु अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ । यदि धनको लागि भगवान गणेशको व्रत बसेको हो भने गणेशलाई घ्यू अपर्ण गर्दा छिट्टै प्रसन्न हुने विश्वास रहेको छ । गुलियो खानेकुराहरुबाट प्रसन्न हुने भएकाले गणेश भगवानलाई सख्खरबाट बनेका गुलिया चिजहरु चढाउनुपर्छ ।